Ingabe umvikeli Pro ungumkhonyovu? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Umkhonyovu wasemuva - izixazululo eziqondiswe esenzweni
Umkhonyovu wasemuva - izixazululo eziqondiswe esenzweni
Ingabe umvikeli Pro ungumkhonyovu?
Lezi WindowsUmvikeli Proizexwayiso zenzelwe ukukuthusa ucabange ukuthi ikhompyutha yakho ithelelekile ukuze uzoshayela inombolo efakwe kuhlu lwesexwayiso esingamanga. ... Lokhu kupheleleumkhonyovufuthi akufanele uthenge noma yini kusuka ezinombolweni ezisohlwini lwezexwayiso.17 umhlaka 2015
Ngizozama ukungayephuli iminwe yami. Ngithenge izicathulo ezingabhubhi ukubona ukuthi empeleni azinakonakala noma ziyigimmick eshibhile. Ngakho-ke emasontweni ambalwa kunendatshana ekhombisa ukuthi ungasifaka kanjani kabusha amaphrojekthi ajwayelekile noma eminye imikhiqizo yamateku emhlophe esebenzisa i-Margom sole, kepha anginawo amaphrojekthi agugile.
Ngakho-ke uma unamabhangqa futhi ufuna ngiwavuselele ungishayele i-histogram futhi ngizowavuselela mahhala ukuze ngikwazi ukuqala kabusha le ndatshana. Futhi namuhla kungenzeka kube yindatshana ezwakalayo. Sisalele emuva ekukhiqizeni, ngakho-ke sisebenza sekwedlule isikhathi ekukhiqizeni, futhi kunomsebenzi owenziwayo engadini ngaphandle futhi kukhona nokushayela ngaphandle ngaphandle ngakho angikwazi ukulinda ukufika esitolo esisha.
Manje sifika ezicathulweni. Ngakho-ke lezi yizicathulo ezingenakonakala, noma okungenani uhlobo lwazo. Lokhu ngikuthole ku-amazon.
Futhi kunezindawo eziningi ezahlukahlukene zokuzithenga ngaphansi kwamagama amaningi ahlukene. Lokhu ikakhulukazi i-brand Edsy E D S Y. Imodeli ingu-703.
Umbala uluhlaza okotshani. Babiza u- $ 45 futhi abakutsheli ngempela ukuthi benziwa kuphi. Kepha ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukucabanga ukuthi zenziwe eChina.
Futhi njengoba ngishilo kukhona amathani wemikhiqizo ehlukene laphaya kepha ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi wonke enziwe efektri efanayo ngakho-ke lokhu kubuyekezwa kufanele kube kuhle kakhulu kuzo zonke izindawo ezahlukahlukene lapho ungathenga khona izicathulo. Kuthiwani uma ungazi ukuthi lezi zicathulo ziyini? Kufanele sizithole sinezibalo zabantu ezihluke ngokuphelele ngoba, njengezikhangiso zalesi, ngibona lezi zingapheli kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ezihlukile. Yilezo izicathulo, futhi ngifaka nje ezinye izithombe-skrini zazo ezinyathela ngezipikili, ngizigijimela futhi ngizenzela lonke uhlobo lwezinto ezingasile.
iphutha lokubuka 0x800300fd
Futhi sekuvele kunezibuyekezo ezimbalwa ezivela kubantu ababuyekeza isivivinyo osibona kulezi zikhangiso. Ngakho-ke angifuni ukuphinda ngikwenze lokhu futhi ngisafuna ukukwenza. Ngakho-ke sayigijimisa nemoto.
Uzwane lwensimbi lusebenze kahle. Sasimi eqenjini lezipikili, sasebenza kahle, yize kwakwesabisa kakhulu. Ziyashintsheka futhi ziyathambeka, futhi zinesisindo esingaphansi kwephawundi.
Ngakho-ke esikhundleni sokungena ekujuleni, ngithanda ukuzama ezinye izivivinyo ezingasinikeza idatha engabazeka kakhulu, uma kungenjalo isayensi kakhulu, kepha isengcono kunalutho. Ngakho-ke kunezinto ezimbili ezibalulekile engifuna ukuzithola kule ndatshana. Okokuqala ukuthi ngifuna ukubona ukuthi lezi zakhiwa kanjani nokuthi ziqine kangakanani noma zakhiwe kahle kangakanani.
Ngakho-ke sizohlanekezela izingqimba bese sibona ukuthi yini ngaphakathi nokuthi kunzima kanjani ukwahlukana. Futhi into yesibili esizoyenza ukuzama ukubeka izinombolo ezithile phansi ekutheni i-outsole imelana kanjani nokuthi i-kevlar midsole ingakanani. Ngakho-ke ake siqale ukuhlaziya lesi sihlangu ngaphambi kokwenza izivivinyo, KULUNGILE.
Ngidabule yonke into ngakho-ke ake sidlule ezingqimbeni eziqala ngokufakwa noma nge-insole. Ngakho-ke ukufaka i-EVA foam, kushibhile impela, hhayi okuningi. Ngemuva kwalokho siye ezansi kungqimba lwe-kevlar oluphume kalula kakhulu engxenyeni yokuqala.
Empeleni besivele sikhululekile ngakho-ke ngakhipha iningi laso ngase kufanele ngisike i-vamp ukuze ngiphume konke ngoba lapho kwakukhona khona insimbi, ama-toerolls angaphansi ayenamathele ndawonye kahle impela. Isendlalelo esilandelayo kungaba uzwane lwensimbi. Ngakho-ke esikhundleni sokusika i-bandsaw, ngiyinqume ngokwahlukana ngezizathu eziningana.
Isizathu sokuqala ukuthi bengingafuni ukuzama ukusika ngeKevlar ngesaha yami yebhendi. Kuzwakale nje njengenhlekelele elindele ukwenzeka. Okwesibili ukuthi bengingafuni ukuzama ukusika le nzwane yensimbi ngaphandle kokuyivivinya, ngivele ngabona ukuthi iyinzwane yensimbi.
Ngakho-ke lokhu kuzosinika ipulatifomu enhle ngethemba lokuhlola i-Steel Toe. Futhi ngokulandelayo sine-outsole. Ngakho-ke le nto mncane ngokumangazayo.
Kubantu abaningi abathengisa izinzipho zabo kuzikhangiso nakwezinye izibuyekezo (kufaka phakathi nami), lokhu kuncane kakhulu kunalokho ebengikulindele. Cishe ngamamilimitha ayi-4 ubukhulu futhi izwakala ijwayelekile, angazi ukuqagela kwami ​​i-PVC. Akusho empeleni, akukho kuzikhangiso noma ukufakwa kuhlu noma kuphi.
Kepha izwakala ifana ncamashi namathenta e-PVC eDoc Martens. Ngakho-ke lokhu ukuqagela kwami ​​okuhle kakhulu. Futhi angicabangi ukuthi lobu bufakazi bokubhoboza kakhulu.
Bengicabanga ukuthi lokhu kuzoba okungenani kabili noma kathathu ukushuba ukukunika ukumelana nokubhoboza, ngakho-ke ngicabanga ukuthi konke lokho ukumelana nokubhoboza kukwi-kevlar. Kepha ngicabanga ukuthi sizobona. Okulandelayo phezulu.
Ngisola ukuthi indwangu ebumbene i-polyester. Ukuphela kwento ebengikhathazeke ngayo kakhulu lapho kusikwa kuvulwa ukuthi benginethemba lokuthi kuzoba nzima impela ukuklebhula okuphezulu kusuka ekupheleleni, obekuyikho. Izikhathi eziningi, izicathulo ezingabizi kakhulu zingakhishwa phezulu, futhi kuwuphawu oluhle lokuthi izicathulo zizohlala isikhashana nje, kepha bekunzima ngempela ukuzidabula.
Bekufanele ngikhiphe izingidi zesiteshi ukuze ngizihlukanise. Enye into engaba yimbi ukuthi le kevlar midsole incane impela. Ukukhathazeka kwami, uma bengingathembela kulesi sicathulo ekumelaneni nokubhoboza okungokoqobo, ngabe isipikili singashaya ohlangothini lwesicathulo, ngiphuthe leyo kevlar midsole bese ngigcina ngishaya unyawo lwami.
Ngakho-ke ukukhathazeka kwami ​​okukhulu. Sizobona ukuthi ngabe leli khokho lingamelana nokubhoboza, kepha uma kungenjalo kuyethusa. Futhi-ke ngifuna ukuthatha ukufundwa kwe-Adurometer kuleso sikhwama futhi uma ngiyibhoboza lapho kuphuma ibanga eliwu-14 kuya ku-12 elithambe kakhulu kunezindawo zangaphandle zaseMargom okungenzeka ukuthi akukuhle ukumelana nokubhoboza.
Manje ake sihlehlise izivivinyo zokumelana nokubhoboza okuzoba yisayensi enkulu. Futhi kukhona amagiya okuhlola lokho, kepha kubiza kakhulu futhi ngizama ukufika lapho ngingakwazi khona ukuthenga lelo giya ngoba bekungaba kuhle impela ukuthola izinombolo ngezici ezahlukahlukene zezicathulo namabhuzu bese uthola ukumelana nokubhoboza njengoba kanye namandla nezinto zokwakha, kepha kuze kube manje sizomane sikukhuthaze. Ngakho-ke kulolu vivinyo, ngicabanga ukuthi nginesixazululo esilungile.
Ngakho-ke lena yikhithi yendandatho yemali okufanele ngikwazi ukusika isichibi esiyisiyingi kunoma iyiphi into engifuna ukuyibhoboza: i-kevlar midsole ne-outsole. Ngakho-ke lokhu kusivumela ukuthi sikubeke kulokhu bese sibeka ikepisi kuso esicindezela phansi lelo phethini (ngethemba) ngokulinganayo yonke indawo kepha imbobo, ngakho-ke uma sifaka lo dayi lapha futhi siwucindezela, iphethini akuyona ngeke ingene. Akufanele iyibambe iqine futhi isinike isilinganiso esihle sokuthi kudinga amandla angakanani ukunamathela.
Kulungile, ngemuva kokudlala ngakhona kancane, ngicabanga ukuthi nginovivinyo oluzosebenza ngokwanele. Nginesipikili ku-2x4, kepha kujule ku-2x4. Sethemba ukuthi le 2x4 izosinika ipulatifomu elinganayo - ipulatifomu esezingeni elithe xaxa futhi esatshalaliswa ngethemba lokucindezela ngamandla alinganayo kulesi sipikili ngaphandle kokuyigoba ohlangothini olulodwa noma kolunye.
KULUNGILE. Ngemuva kwalokho sinemihlahlandlela embalwa lapha ezosiza ukuvimbela kakhulu emuva naphambili futhi ngethemba lokuthi izosigcina siqonde ngangokunokwenzeka. KULUNGILE.
Manje ake ngikukhombise ukusethwa kokuhlolwa. Kulungile, leso yisikhathi sokuhlola, ukusethwa kokuhlolwa, umdlalo wokuhlola. Ngakho-ke i-crane enezimoto ezihamba ngamathani amabili ixhunywe esikalini esincane se-crane, bese-ke lokhu kungukuqala kwamazinyo kwekhulu lama-20, ngokuyisisekelo okuyi-grinder yamazinyo.
Inesisindo esingamakhilogremu angama-48. Ngokombono nasezivivinyweni ezedlule, ngingakubeka lapha, ngifake isipikili nebhodi ngaphansi kwaso, ngisinciphise kancane, ngibone ukuthi isisindo siguquka kangakanani, okusinika isilinganiso sokuthi kuzothatha amakhilogremu amangaki ukubhoboza. Kulungile, isivivinyo sokuqala.
Sinalo mbuthano omncane we-outsole. Faka lokhu ku-rig yethu. Ngenisa kanjena.
Susa isikulufa sethu phezulu bese uqinisekisa ukuthi lokhu kuqinile impela ngoba lena yazo inamathuba amaningi okululeka. Sebenzisa imihlahlandlela yethu. Manje zama ukuhola le ngane.
Ngizozama ukuyiqhuba kancane kusuka ngaphezulu ngalesi sikhathi. Ake siye ekudlaleni ukudlala ukubona ukuthi kwenzekeni. Ngemuva kokubuyekeza amavidyo wokudlala, kubukeka sengathi kuthatha cishe wonke amakhilogremu angama-48 esinawo ku-lathe.
Ngakho-ke lokho kusho ukuthi sinokusetha kwe-beefier kwe-kevlar, ngicabanga. Kulungile, iya esivivinyweni se-Kevlar. Faka lokho kuthuluzi lokusetha kabusha futhi angicabangi ukuthi lokho kuzokuphunyuka.
Ngakho-ke ngithole lolu cezu lwensimbi olungamakhilogremu ayi-12 oluzosinika okungenani amakhilogremu ambalwa. Lokhu ngeke kusebenze. Kepha kufanele uzame.
Kulungile, asihambe. Ngizozama ukungayephuli iminwe yami. Hhayi, konke lokho kungamakhilogremu angama-48 kanye namakhilogremu ayi-12 futhi akusakazeki yonke indawo.
Ake sibheke ucezu lweKevlar, noma kunjalo. Ngakho-kev kevlar ngemuva kokuhlolwa: isifaca esikhulu kuso. Akuzange kudlule nakanjani.
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi ngokulandelayo ngizozama ukuma kuwo ngibone ukuthi ngingakwazi yini ukukwenza ngoba lokho kungasinika indawo yokubona ukuthi kuthatha isisindo esingakanani futhi sibone ukuthi ngabe kulesi sihloko kungenzeka yini ukubhoboza lokhu. Kulungile. Sithole isampula elisha le-kevlar - i-kevlar esolwayo.
Ngakho-ke sikuthola lapha. Faka okumnandi futhi okuqinile. Sebenzisa abaholi bethu.
Ngizozama nje ukuma kuwo ukuze ngibone ukuthi amakhilogremu ayi-185 ayakudlula yini lokhu. Lokho nakanjani kudlule. Lokho kwakuseduze kakhulu nesisindo sami esigcwele.
Ngakho-ke hhayi izivivinyo zesayensi ezedlula zonke ezake zaba khona, kepha imiphumela ethokozisayo nokho. Manje njengoba sesiqedile ngezivivinyo zethu ezinkulu zesayensi, ake sidlule futhi sikhulume ngemiphumela. I-kevlar idabule phakathi kwayo kalula kalula ngaphansi kwesisindo sami futhi lokho kungenza ngikhathazeke ngokugqoka lezi zicathulo futhi kube sengathi ngizophepha uma nginyathela isipikili ngoba bengingacabangi ukuthi uzoba Wazi konke mayelana isisindo esikhonkwaneni esisodwa, ngicabanga ukuthi lokho kungangena futhi kube nethuba lokungena ezinyaweni zakho, ikakhulukazi ngosayizi we-midsole njengoba sibonile ngaphambili, uma kukugeje ngokuphelele lokho, usuqedile ngoba i-outsole ithathe kuphela amakhilogremu angama-45 ukungena, futhi lokho kuyikota yesisindo sabantu abaningi, futhi lokho kuyethusa.
Ngokuqondene nesihlangu sonke, ngicabanga ukuthi uma uzosebenzisa lesi sicathulo ngendlela efanayo nesicathulo lapho ufuna ukuvikeleka okwengeziwe, uma kwenzeka okuthile kuhamba kabi kakhulu, akuyona into embi ngo- $ 45 , Kodwa-ke kunezicathulo ezingcono kakhulu laphaya futhi ngicabanga ukuthi udinga ukungena kuzo wazi ukuthi kunethuba lokuthi zingahamba kabi ngendlela eyinhlekelele. Uyazi asizange- ngaphelelwa yisikhathi sokuhlola uzwane lwensimbi. Bengifuna ngempela ukukuhlola, kepha kunguLwesibili ebusuku, lo mbhalo uphuma ngoLwesithathu ekuseni, kusasa ekuseni, ngakho-ke ngizohlenga lokho kuhlolwa kwensimbi kolunye udaba lapho sizongena sijule ezinzwaneni zensimbi futhi mhlawumbe iqembu lezinzwani zensimbi bese uzihlola kumadivayisi wokuhlola angcono, ngoba lokhu bekungaphandle kwesayensi.
Ngakho-ke uma lokhu bekungafundisi, ngethemba ukuthi okungenani bekujabulisa ngoba bekumnandi, yize sengimanzi te umjuluko manje. Futhi kukwenza ufune ukubona amadivayisi wokuhlola wangempela. Futhi ngemuva kokwenza lokho, ngicabanga ukuthi ngokuzayo le ndatshana noma isiteshi sizohamba lapho engingathola khona imishini yokuhlola umhlaba wangempela futhi ngithole ukwenzelela nemibono eminingi ezintweni ezifana neProject Farm uma unalesi siteshi oke wabona.
Ngingathanda ukwenza lolu hlobo lwe-athikili ngemishini ethile yokuhlola yomhlaba futhi ngisule izimpikiswano nemibono ethile futhi ngiyenze ibe ngokwesayensi ngangokunokwenzeka. Uma ukujabulele lokhu, cabanga ukubhalisa nokubeka amazwana ukuze sikwazi ukuthola imishini yokuhlola yangempela. Ngakho-ke ngiyabonga ngakho konke okwenzayo.
Ingabe i-imeyili ye-Defender firewall i-scam?
Empeleni, kuyi-umkhonyovu. IMicrosoft inayo into ebizwa ngeWindowsVikela, kepha iyi-antivirus yamahhala ne-antimalware protection suite evela ku-Microsoft efakiwe ku-Windows 10!
UNEIL KUMARAN: Uyemukelwa embukisweni wezokuphepha we-Google Cloud, uchungechunge lwewebhu oluzinikele lapho sigxila ezimeni zokusebenzisa ezokuphepha amakhasimende angazixazulula nge-G Suite. Igama lami ngingu-neil Futhi ngingumphathi womkhiqizo kwa-Google Cloud. Ngizodlula komunye wemibuzo ebaluleke kakhulu esiyithola kumakhasimende: yiziphi izivikelo zobugebengu bokweba imininingwane ebucayi kanye ne-malware ezikhona futhi ngizilungiselela kanjani? Ake siqale ngezilawuli zobugebengu bokweba imininingwane ebucayi ezithuthukisiwe nezilawuli ze-malware kuqala.
Lezi zilungiselelo zingatholakala kusigaba sokuphepha sezilungiselelo ze-Gmail ku-Admin Console. Izilawuli ezikule ndawo zikuvumela ukuthi uvule ukuvikelwa kwezinhlobo ezithile zosongo. Namuhla kunezigaba ezintathu zezilawuli: okunamathiselwe, izixhumanisi nezithombe zangaphandle, ne-spoofing -Authentication.
Esilungiselelweni ngasinye, ungakhetha ukuthi uyinike amandla nokuthi sithathe siphi isenzo kumilayezo efana nesilungiselelo esinikwe amandla. Ngezilungiselelo ezithinta imilayezo ethile, ungacacisa ukuthi umyalezo ohambisanayo uhlala ebhokisini lemilayezo engenayo yomsebenzisi uma kwenzeka kuba ne-war ning banner yokuhambisa umyalezo ngqo kufolda yogaxekile noma ukuhambisa umyalezo endaweni yokuhlukaniswa komlawuli. Lezi zilungiselelo zingasetshenziswa futhi kusizinda sonke noma iyunithi ngalinye lenhlangano.
Manje ake sibheke ngokushesha ezinye izilungiselelo kule ndawo. Ake siqale ngokunamathiselwe. Isethingi sokuqala ukuvikela okunamathiselwe okubethelwe kubathumeli abangathembekile.
Izinanyathiselwa ezibethelwe azikwazi ukuhlolwa i-malware. Lesi silungiselelo sikuvumela ukuthi umake yonke imilayezo ebethelwe ethunyelwe kubasebenzisi bakho ngamabhizinisi abangazange baxhumane nawo ngaphambilini. Isethingi esilandelayo ukuvikela okunamathiselwe ngama-script kusuka kubathumeli abangathembekile.
Ukutheleleka okuningi kwe-malware kwenzeka ngezikripthi ezinonya kumadokhumenti. Ukwehlisa le vector yokusongela, ungasebenzisa lesi silungiselelo ukumaka imibhalo kusuka kubathumeli abangathembekile Izinhlobo Izinhlobo zivame ukusetshenziselwa ukusabalalisa i-malware ngokungajwayelekile kokunye.Lokhu kulungiselelwa kukuvumela ukuthi umake noma yimuphi umlayezo onesinamathiseli nesingajwayelekile kakhulu sohlobo lwakho lwesizinda .
Okulandelayo, ake sibheke izilungiselelo ezimbili kusigaba sezixhumanisi nezithombe zangaphandle. Isethingi sokuqala lapha ukukhomba izixhumanisi ezingemuva kwama-URL afinyeziwe. Abahlaseli bavame ukusebenzisa izifinyezi ze-URL ukufihla izixhumanisi ezinonya.
Ngalesi silungiselelo, i-G Suite ingaxazulula lawa ma-URL ukuze ithole okuqukethwe okunonya. Okulandelayo, ake sibheke kuthwetshulwa izithombe ezixhunyiwe. Lokhu kunika amandla ukuskena kwezithombe ezikhonjwe izixhumanisi ukuthola okuqukethwe okunonya okufihliwe.
Bheka ngokushesha isigaba se-Spoofing and Authentication. Kunezilungiselelo eziningi kulesi sigaba. Kepha ake sibheke ezimbalwa.
Okokuqala, zivikele ekuqothulweni kwesizinda ngokuya ngamagama wesizinda afanayo. Lesi silungiselelo sivikela kumilayezo evela ezizindeni ezibukeka zifana ne-Trustedones. Okulandelayo, zivikele ekuqothulweni kwegama lesisebenzi.
Lesi silungiselelo sivikela emilayezweni lapho igama lomthumeli we-imeyili liyigama enkombeni yakho yenkampani, kepha i-imeyili ayiveli kusizinda sakho noma ekuzindeni kwesizinda sakho. Ekugcineni, uvikela i-imeyili engenayo eyi-Spoof domain yakho. Lesi silungiselelo sivikela imilayezo engagunyaziwe futhi ekhomba ukuthi ivela kusizinda sakho.
Akuxoxiswanga. Futhi sikukhuthaza ukuthi uzibheke zonke. Njengoba kungenzeka uqaphele, kunebhokisi lokuhlola ezansi kwesigaba ngasinye elithi 'Sebenzisa ngokuzenzakalela izilungiselelo ezinconyiwe zesikhathi esizayo.' Ukuhlola leli bhokisi kuzokwazisa ngokuzenzakalela kunoma iziphi izilungiselelo zesikhathi esizayo esingahle sizenze ukuqinisekisa ukuthi isizinda sakho sigcinwa sivikeleke ngokuphelele.
itreyi lomenzeli wedeskithophu
Esinye isici ebesifuna ukugqamisa namuhla kwakuyibhokisi lesanti lokuphepha. Uma unabasebenzisi be-G Suite Enterprise Edition, ungathola lokhu kulungiselelwa ekhasini elithi 'Izilungiselelo Ezithuthukisiwe' ngaphansi kwezilungiselelo ze-Gmail kusigaba Sogaxekile, Ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi kanye ne-Malware. Umsebenzi we-sandbox yezokuphepha usebenza kahle kakhulu ekunqandeni i-malware engaziwa nezinsuku ezingama-zero.
Ithola ubukhona be-malware engaziwa nokunamathiselwe ngokukusebenzisa cishe endaweni yangasese, evikelekile yebhokisi le-sandbox nokuhlaziya imiphumela emibi ohlelweni lokusebenza ukuthola ukusebenza okunonya. Okunamathiselwe kutholakala ebhokisini le-sandbox ngokungathi umsebenzisi uqobo ubachofoze imizuzu ngaphambi kokuthi i-imeyili ilethwe, inikeze abasebenzisi olunye ungqimba lwezokuphepha. Ungavumela i-sandbox yezokuphepha ngokumaka nje leli bhokisi.
Futhi ungasetha imithetho yangokwezifiso yebhokisi le-sandbox lokuphepha ngokudala umthetho wokuphepha we-sandbox. B. Ngaphandle kwethrafikhi yangaphakathi kwesizinda kusuka ku-sandboxing noma ngaphandle kwethrafikhi evela ku-IP ethile.
Ekugcineni, ungasebenzisa imithetho yokuhambisana nokuqukethwe ukuhambisa i-malware ethunjwe yi-sandbox ngqo kokuhlukaniswa okulawulwa ngumlawuli. google.com/security ngokuqukethwe okuningi kusuka kochwepheshe be-Google Cloud.
Ingabe ukuvikelwa kweWindows Advanced Scam ngumkhonyovu?
'AmawindiI-imeyili ye-Defender Order 'engezansi, ecela abamukeli ukuthi bashayele inombolo yocingo +1 877-295-2322 iyi-umkhonyovu.Febhuwari 2 2021
Ngabe iMicrosoft iyakhokhisa ngomvikeli?
AmawindiVikelaifakiwe neWin 10. Ayikhoukukhokhisa. Akukho okubhaliselwe. Qiniseka ukuthi ushintshe amaphasiwedi futhi ubheka yonke idatha yomuntu siqu neyezezimali kwikhompyutha ukuthi ingahle ibe sengozini ... ungadinga ukuxhumana namabhange, abahlinzeki bekhadi lesikweletu, njll.Kwangathi 20, 2017
IMicrosoft Defender Application Control iguqula imodeli yokuphepha yohlelo lokusebenza, isuke ekuthembeni yonke into ize, ize ifanele lokho kuthenjwa. Kulesi sihloko ngikhombisa ukuthi i-Application Control isebenza kanjani nokuthi isetshenziswa kanjani. Kuliqiniso elidabukisayo ukuthi abasebenzisi abaningi bathembela kuyo yonke into futhi ngokujwayelekile bayagijimisa ngaphambi kokuvula izinto ezinjengezinamathiselo ze-imeyili.
Isibonelo, ngisanda kuthola le imeyili evela kumhlinzeki. Kubukeka njengesikweletu. Ikheli le-imeyili lilungile futhi nginesiqiniseko sokuthi lo muntu ubengeke angithumele umyalezo omubi.
Akulungile. Ngivula okunamathiselwe bese ngibona ngokushesha ukuthi kukhona okungahambi kahle. Angazi namanje, kepha ngisanda kufaka i-malware ezosebenzisa ikhompyutha yami ukwenza izimali zomhlaseli.
Ukulawulwa kohlelo lokusebenza kusiza ukuvimba lezi zinhlobo zokuhlaselwa ngokukhawulela izinhlelo zokusebenza, imibhalo, kanye nabafaki abasebenzisi abangaqalisa. Kukusiza ukwakha umbuthano wokuthembela ngezinhlelo zokusebenza ezivunyelwe. Noma yini engekho kulowo mbuthano ngeke isebenze kulokhu Kulokhu, ifayela le-Excel elilandiwe lalinombhalo ongathembekile.
Ngizama ukuvula leli fayela futhi, kepha kulokhu nge-Application Control inikwe amandla. Lapho ngenza lokhu, engikutholayo ngukuthi: Ugaxekile ongitshela ukuthi i-Application Control isivule uhlelo lokusebenza (ngicabanga ukuthi ngiwinile, angizukumba izimali zami namuhla.) Ngokulandelayo, ngizochaza ukuthi i-Application Control isebenza kanjani.
Kunezindlela ezimbili zokuvimba izinhlelo zokusebenza ezinonya: Vumela-Uhlu noLalela-Uhlu. I-Deny-List yinqubomgomo evulekile yomnyango yanoma yiluphi uhlelo lokusebenza kuze kube kutholakala ukuthi inonya, bese uyifaka kuhlu lokuphika. Inkinga ukusabalalisa.
Ayikho indlela ongaqhubeka ngayo nezigidi zezinhlelo zokusebenza ezinobungozi laphaya ngenqubomgomo yomnyango evaliwe. Awuthembi noma yini engekho ohlwini lwakho. Kulokhu, wakha umbuthano wezinhlelo zokusebenza ezethembekile.
Njengoba kungenzeka uqagele, ukulawulwa kohlelo lokusebenza kusekelwe kuhlu lokuvumela; wakha uhlu lwezinhlelo zokusebenza ezivunyelwe ukusebenza futhi luvimba konke okunye. Ungakhathazeki. Ukulawulwa kohlelo lokusebenza kunezindlela ezithile ezinhle zokukuqalisa ngomzamo omncane noma ungasebenzisi nhlobo; ngokwesibonelo, ungavele uthembe zonke izinhlelo zokusebenza ezinedumela elihle futhi uvimbele konke okunye.
Leli dumela livela kuMicrosoft Intelligent SecurityGraph. Isebenzisa ubuhlakani bokufakelwa, ukufunda ngomshini, namanye amasu ukucubungula izigidigidi zamasignali ngaphezulu kokuqinisekiswa kwezigidigidi ezingama-630 njalo ngenyanga. Futhi iskena ama-imeyili ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-470 ngemizamo ye-malware nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi.
I-Intelligent Security Graph iguqula lezi zimpawu zibe yizihlakaniphi ezinokusatshalaliswa, kulokhu okuyidatha yedumela futhi engezwa inyanga ngayinye lapho imikhiqizo yeMicrosoft ingahle ikhombe futhi iphendule kuyo. IMicrosoft Defender ATP iqoqa imininingwane enemininingwane lapho uhlelo lokusebenza lilawula uhlelo, isifaki noma iskripthi esivimba. Thatha isibonelo ukuhlasela engisanda kukuhlola.
Nakhu ukuthi kubukeka kanjani kumugqa wesikhathi wekhompyutha yami ku-Microsoft Defender Security Center. Uyabona ukuthi Ukulawulwa Kohlelo lokusebenza kuvimbe i-malware ngoba bekungavunyelwe. Okulandelayo, ake sibone ukuthi kulula kangakanani ukunika amandla nokuphatha uhlelo lokusebenza.
Ukulawulwa kohlelo lokusebenza kulula. Amasethingi wokulawula uhlelo lokusebenza atholakala kumaphrofayili wokumiswa kwedivayisi. Ngakho-ke ngakha iphrofayili entsha bese ngisetha uhlobo ekugcineni kokuvikela.
Bese ukhetha iMicrosoft Defender Application Control ukuyilungiselela. Okokuqala, ngizosebenzisa izinqubomgomo zezempilo zokulawula uhlelo lokusebenza; enye inketho, ikakhulukazi uma ufuna ukusebenzisa iMicrosoft Defender ATP ukuqapha umthelela ngaphambi kokuyisebenzisa, ukubheka nje uhlelo lokusebenza. Okulandelayo, ngizonika amandla izinhlelo zokusebenza ezethembekile ezinedumela elihle.
Lokhu kunweba indingilizi yethemba lethu ukuthi lifake phakathi izinhlelo zokusebenza ezinedumela elihle ku-Intelligent Security Graph, ngaphezu kwalezo eziza neWindows noma lezo abasebenzi abazifaka ku-Microsoft Store. Isinyathelo sokugcina p ukwabela iphrofayili. Khetha Izabelo bese ukhetha amaqembu ofuna ukuwafaka.
Kulokhu, ngifaka wonke amadivayisi wami. Ungadinga ukudala nokusabalalisa izinqubomgomo ezingeziwe ukuhlangabezana nezidingo zakho ezithile ... kuqalwe ngokulawulwa kohlelo lokusebenza, uvimba izinhlelo ongazethembi.
Ukulawulwa kohlelo lokusebenza kungavimbela i-malware ukuthi isebenze kumadivayisi wenkampani yakho ngokwakha indingilizi yezinhlelo zokusebenza ezethembekile nokuvimba konke okunye. Ngeminye imininingwane ngokulawulwa kohlelo lokusebenza, bheka iMicrosoft Docs.
Ingabe ikhona into efana nokubuyiselwa kwemali kweWindows Defender?
Qaphela lo Mkhonyovu weWindows Defender! Imikhonyovu yeWindows Defender sekuneminyaka ikhona futhi sibona entsha yenza imizuliswano yayo ithi bakukhokhise u- $ 299.99 okhokhiswa minyaka yonke futhi uma ufuna ukubuyiselwa imali, banikeza inombolo ongayishayela. Bheka le imeyili esisanda kuhlangana nayo ezenza njengomyalezo ovela ku-Windows Defender Scam.
Ungasusa kanjani isibuyekezo esibalulekile somvikeli?
Usebenzisa insiza yokususa i-malware ukufuna nokususa i-adware ecashile kukhompyutha yakho uqobo kuyindlela elula yokuqeda umkhonyovu obalulekile we-Defender Defender. Sincoma uhlelo lweZemana Free lwamadivayisi we-Microsoft Windows.
Ingabe iWindows Defender ifakiwe ku Windows 10?
I-Windows Defender ibilokhu imahhala futhi ifakiwe kwi-Windows 10. Uma udinga usizo noma unemibuzo ngemikhiqizo ye-Microsoft, hlala usebenzisa ingosi esemthethweni https://support.microsoft.com/en-us. IMicrosoft inazo zonke izinhlobo zezinsizakusebenza zomkhiqizo wayo weWindows Defender lapho.